लाहुरेका हुर्किसकेका सन्तान भनेपछि दिमागमा आइहाल्छ– हङकङको आईडीवाला वा बेलायती रातो पासपोर्ट बोक्ने । यी सवाल कटारी, उदयपुरका निबन राईमा भने लागू हुन्न । हङकङमा जन्मिएका उनी अचेल सूर्यविनायक, भक्तपुरमा कुखुरा स्याहार्नै व्यस्त छन् ।
युट्युबबाट ८३ लाख भिडियो डिलिट
केही वर्षयता घृणात्मक खालका भिडियोहरू नहटाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला युट्युबले सन् २०१७ को अन्तिम तीन महिनामा आफ्नो प्ल्याटफर्मबाट ८३ लाख भिडियो डिलिट गरेको सार्वजनिक गरेको छ । हिंसा, घृणा र यौन उत्तेजना फैलाउने खालका भिडियोलाई डिलिट गरिएको युट्युबले जनाएको छ ।
सामान्यतया फोनबाट हुने म्यासेजमा हामी अक्षर र इमोजी मात्रै पठाउन सक्छौं तर गुगलले एन्ड्रोइड फोनका लागि नयाँ एप सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसले फोनको म्यासेज एपमा जोडिएर प्रयोगकर्तालाई अक्षरबाहेक फोटो, भिडियो पनि पठाउने सुविधा दिनेछ ।
ती आयुषा यी आयुषा
त्यो आकर्षक अनुहार । बोल्ड लुक्स । आत्मविश्वासी केटी । मिस टिन (सन् २००७) की विजेता आयुषा कार्कीले आफ्नो परिचय बनाएकी थिइन् । उनी नेपाली मोडलिङ जगत्मा लामै समय राज गर्ने अनुमान गरिएको थियो । फिल्ममै प्रवेश गरेर अभिनयमा जम्नसक्ने अड्कल पनि भएको थियो ।
जानकारीको भण्डार विकिपेडियाले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि सजिलो हुने नयाँ फिचर सुरु गरेको छ । विकिपेडियामा जानकारीका लागि पढ्दा हुने रिफ्रेन्स लिंकमा जान यसअघि प्रयोगकर्ताले क्लिक गरी छुट्टै पेजमा जानुपर्ने हुन्थ्यो तर अब भने यो बाध्यता रहेन ।
द कार्सको प्रभाव
सन् सत्तरी र अस्सीको दशक पश्चिमेली संगीतमा तहल्का मच्चाएको अमेरिकी ब्यान्ड ‘द कार्स’ लाई रक एन्ड रोल हल अफ फेमबाट सम्मानित गरिएको छ । यस ब्यान्डबारे हिमेश लेख्छन् :
भर्खरै संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ र स्थानीय सरकार बनिसकेका छन् । सिंहदरबार केन्द्रित सेवालाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय सरकार आफूलाई स्मार्ट बनाउन चाहन्छन् । स्थानीय सरकारको प्रमुख पदका हरेक उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउने घोषणा चुनावताकै गरेका थिए । तर, यस्तै घोषणा गरेर चुनाव जितेकाहरू पनि आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी स्मार्ट बनाउने भन्नेमा प्रस्ट छैनन् । यसको उपाय निकालेका छन्, मनोज भट्टराईले ।
“नयाँ यात्राको सुरुवात”
सांगीतिक समूहमा ‘फ्रन्टम्यान’ सबभन्दा लोकप्रिय हुन्छन् । सबैले उसैलाई रूचाउँछन् । समस्या पर्दा सबभन्दा बढी पीडा पनि फ्रन्टम्यानलाई नै पर्छ । मंगोलियन हार्टले २५ वर्ष पुग्दा राजु लामाले दुवैखाले अनुभव बटुले । एकपछि अर्को चर्चित नम्बरहरु दिइरहेका उनको शब्दमा ब्यान्डको रजत यात्रा :
हेलो, म तपाईंको सारथि ।’यो आवाज कतै सुनिएको छ ?
फेसबुक र गुगललाई प्रश्न: हाम्रा जानकारी के गर्छौ ?
हामीले म्यासेजमा गर्ने कुराकानी फेसबुकलाई थाहा हुन्छ ? हामीले डिलिट गरेको च्याट फेरि कसैले पढ्न सक्छ ? हामीले गुगलमा सर्च गरेको जिज्ञासा कसैका लागि मसला बन्न सक्छ ? हामीले भिजिट गरेको वेबसाइट कसैका लागि विज्ञापनको सूत्र बन्न सक्छ ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा अहिले ‘प्राइभेसी’ को बहस केन्द्रित छ ।
जेम्स प्रधान सबैले प्रयोगवादी वा फरक खालको (युनिक) गायक भनेर पनि चिनिन्छन् । उनका गीतहरू फरक शैलीका हुन्छन् पनि । स्वर आफैंमा विशिष्ट छ । तर, यसपाली उनले फरक होइन, पहिलेकै जस्तो सुनिआएको शैलीमा गाएका छन् । नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा पुरानै शैली दोहोर्‍याउन खोजेको उनी स्वयं बताइरहेका छन् ।
केही वर्षयता आन्तरिक पर्यटकका लागि पहिलो रोजाइमै पर्ने गरेको छ, जोमसोम । मुस्ताङ जिल्लामा रहेको जोमसोम चिसो मौसम, तीव्र गतिमा चल्ने हावा, लोभलाग्दा हिमाल, पहाडी दृश्यावलोकन, मुक्तिनाथ दर्शन र पदयात्राका लागि प्रख्यात छ ।
संयोग जस्तै भयो, तीनजना सुश्री ‘सृजना’ हरू काठमाडौंमा भेटिए । तीनैजना गाउँपालिकाका निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् र ३० वर्ष नकटेका ।